गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ्गद्धारा पर्वतको मालढुंगामा भएको बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त - News site from Nepal
गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ्गद्धारा पर्वतको मालढुंगामा भएको बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त
पर्वत–पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १ मालढुंगामा विहीवार बिहान भएको बस दुर्घटनाप्रति गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ्गले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ्गले एक विज्ञप्ती जारी गरी दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेहरुलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफन्तजन र इष्टमित्रहरुमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले घाईतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारमा कुनै कमि हुन नदिन सम्वन्धित असपतालहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । साथै उहाँले उद्धार, उपचार र राहतका लागि खट्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मि लगायत सवैलाई धन्यवाद समेत प्रकट गर्नुभएको छ ।
म्याग्दीको बेनीबाट नारायणगढ तर्फ जाँदै गरेको बस पर्वतका कुश्मा नगरपालिका वडा नं. १ मालढुंगामा सडकबाट कालीगण्डकी नदिमा खस्दा ७ जनाको मृत्यु र ३२ जना घाईते भएका छन् । घाईतेहरुको काठमाण्डौ, पोखरा र बागलुङमा उपचार भैरहेको छ ।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले पनि मृतकहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाईतेहरुको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको छ । उहाँले उक्त घटनाले आफु निकै दुःखि भएको बताउनुभएको छ ।